स्वास्थ्य /जिबनशैली – Patrika Nepal
खेतमा ब्रोकाउली टिप्ने मजदुरलाई १ करोड रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने कुरा सुन्दा हामी अचम्ममा पर्छौं । तर, यो साँचो हो । दिनमा ८ घण्टा काम र हप्तामा २ दिन विदा लिएर समेत ब्रोकाउली टि,प्ने मजदुरले वर्षमा १ करोड रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् । यो अफर बेलायतको एक कम्पनीले दिएको हो ।बेलायती अखबार डेली एक्सप्रेसका अनुसार इङल्याण्डको लिंकनशायरको यो कम्पनीले कर्मचारीको अभाव भएपछि तरकारी टिप्ने मजदुरलाई मोटो रकम अफर गरेको हो । टिएच क्लेमेन्ट्स नामको यो कम्पनीले मजदुरहरुलाई प्रतिघण्टा ३० पाउण्ड अर्थात ४ हजार ८ सय नेपाली रुपैयाँ अफर गरेको छ ।.यस हिसाबले दिनमा ८ घण्टा काम गर्दा मजदुरले २४० पाउण्ड कमाउँछन् । हप्तामा २ दिन विदा लिएर ५ दिन मात्र काम गर्दा पनि उनीहरुले हप्तामा १२०० पाउण्ड कमाउँछन् । वर्षका कूल ५२ हप्ता काम गर्दा उनीहरुले ६२ हजार ४ सय पाउण्ड कमाउँछन् जुन नेपाली १ करोड रुपैयाँ बराबर हो
काठमाडौँ । ज्योतिषशास्त्रका अनुसार, राशि व्यक्तिको जन्म हुने बित्तिकै जोडिने कुरा हो। वैदिक ज्योतिषका अनुसार मानिसका बारे धेरै जानकारीहरू उनको राशिबाट प्राप्त हुन्छ।राशि चिन्हबाट व्यक्तिको व्यक्तित्व, सीपहरू र भविष्यमा उसलाई हुने सबै प्रकारका घटनाहरूको बारेमा महत्त्वपूर्ण कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। ज्योतिषशास्त्रमा जम्मा १२ राशि चिन्हहरू छन् र ती १२ राशिक चिन्हहरूमा सबै मानिस आउँछन्। १२ राशिमा केहि राशिका मानिसको फरक फरक गुणहरू हुन्छन्।सबै १२ राशि मध्ये केहि राशिहरू छन् जसमा माता लक्ष्मीको कृपा सँधै रहिरहन्छ। यी भाग्यशाली राशिले सधैँ माता लक्ष्मीको आशिष पाउँछन्। जसको कारणले गर्दा यी राशीका जातकको जीवनमा खुशी, महिमा र समृद्धिको कमी कहिल्यै हुँदैन। वृष राशि यस राशिको स्वामी शुक्र ग्रह हो। स्वामी ग्रह शुक्र भएको कारण, यी राशिका मूल निवासीहरूमा सँधै समृद्धि र महिमा रहन्छ।वैदिक ज्योतिषमा, शु
ग्या’स्ट्रिक आजकल आम मानिसको समस्या बनेको छ, यसलाई च्वा’ट पार्ने ६ घ’रेलु उपा’य, जान्नुहोस्।
एजेन्सी-आ’जभोलि धेरै ग्या’स्ट्रिकको स’मस्या लिएर अस्पताल जाने गर्छन्। ग्या’स्ट्रिक नभएका मानिस भेट्न मु’स्किल पर्छ। यो स’मस्या विभिन्न कारणले देखा पर्छ । ग्या’स्ट्रिक नेपालीको राष्ट्रिय रो’ग हो भन्दा पनि केही फरक पर्दैन । धेरैको ग्या’स्ट्रिक गुनासो सुन्न पाइन्छ हिजोआज । मानिस खान नपाएरभन्दा पनि खान नजानेर रो’गी छ हिजोआज । त्यसो भए के गर्ने त ? यदि ग्या’स्ट्रिक छ भने यी कुरामा ध्यान दिनुस्, तपाईंको स’मस्या च्वाट्टै निको हुन सक्छ । प्रशस्त पानी पिउने: लगातार पानी पिउँदा पेटमा ग्या’स जम्मा हुन पाउँदैन । जिउमा समेत पानीको सन्तुलन कायम राख्छ । तर, पानीको सट्टा कोक, फेन्टाजस्ता कोल्डड्रिङसकको प्रयोग गर्नु हुँदैन । यसले पेटमा ग्या’स बढाउँछ । लसुनपानी: बिहान उठ्नासाथ दुई–तीन पोटी लसुन पानीसँग निल्ने हो भने ग्या’स्ट्रिक भएकाहरूलाई फाइदा गर्छ । उच्च र’क्तचाप भएकालाई समेत यसले फाइदा गर्छ । खाना
के महिलाको पनि वी,र्य स्खलन हुन्छ ?
के महिलाको पनि वी,र्य स्खलन हुन्छ ? यौ,न उत्तेजना हुँदा सफा रंगविहीन रस केही मात्रामा पुरुषको मूत्रद्वारमा देखिन्छ । यतिबेला महिलाको यो,निबाट प्रशस्त रस आउने कुरा हामीलाई थाहै छ । के चरमसुखका बेला महिलामा फरक किसिमको रस आउँछ त ? केही अध्ययनले महिलाहरूको पनि ‘स्खलन’ हुने कुरा उल्लेख गरेका छन्, तर कतिपय वैज्ञानिकले पुरुषमा वी,र्य स्खलन भएजस्तै महिलाको स्खलन नहुने कुरा बताएका छन् । त्यसैले महिलाको स्खलनको कुरा विवादित नै छ ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***** एउटा कुरा के भने पुरुषको वी,र्य स्खलन महिलामा हुने यस्तो स्खलनको घटनाभन्दा निकै फरक कुरा हो । तपाईंले के कुरालाई संकेत गर्नुभएको हो, स्पष्ट छैन । आधारभूत रूपमा महिला तथा पुरुषमा यौ,न प्रतिक्रिया चक्र उस्तै भए पनि केही कुरामा भने फरक छ ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
धेरै महिलाहरु शा-रीरिक सु-खभो’गपछि रुन थाल्छन् । यदि तपाईं आफैंले यो अवस्था महसुस गर्नुहुन्छ र सोच्नुहुन्छ कि यो तपाईंसँग मात्र हुन्छ भने हामी तपाईंलाई बताउँछौं कि यो एकदम सामान्य समस्या हो । ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***** पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस६६ लाख ग्रामीण बासिन्दाको पहुँचमा छैन आयोडिनयुक्त नुन: स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले खानामा आयोडिनयुक्त नुन प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि नेपालमा ग्रामीण भेगका ६६ लाख मानिसले अझै ढिके नुन प्रयोग गर्दै आएको पाइएको छ ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***** तर आयोडिनयुक्त नुनभन्दा ढिके नुुन सस्तो पर्ने भएकाले ग्रामीण भेगका मानिसले ढिके नुनकै प्रयोग गरिरहेको स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गत पोषण शाखाका प्रमुख केदार पराजुली बताउँछन् ।त्यसो त, आयोडिनयुक्त नुन
महिला र पुरुषबीचको सम्बन्ध सदियौं देखि बहस र वि’वादको केन्द्रमा छ । महिलाले पुरुषलाई नबुझ्ने र पुरुषले महिलालाई नबुझ्ने गुनासो नयाँ कुरा होइन । तर महिलासँग राम्रो स’म्बन्ध राख्नका लागि उनीहरुसँग केही प्रश्न सोध्नै नहुने विज्ञहरुले बताएका छन् । १. के म तिमीलाई चु’म्बन गर्न सक्छु ? कहिल्यै पनि महिलालाई म चु’म्बन गर्न सक्छु ? भनेर सोध्नु हुँदैन । महिलाले चु’म्बनको लागि पनि सोध्ने पुरुष मन पराउँदैनन् । चु’म्बन पनि सोधेर गर्ने केटा उनीहरलाई बच्चा जस्तो लाग्छ । २. धन सम्पतिको धाक: महिलाहरुले सम्पतिको धाक लगाउने र कुरा गर्दै गर्दै कार वा बाइकका विषय झिकेर रवाफ देखाउन खोज्ने पुरुषलाई मन पराउँदैनन् । उनीहरुलाई यस्ता कुरा भन्दा केटाको प्रस्तुती र आत्मविश्वाससँग बढी चासो हुन्छ । मेरो कार देख्या छ मेरो बाइक देख्या छ भनेर कहिल्यै पनि नसोध्नुस् । ३. के गर्ने कसो गर्ने: कुनै पनि स्त्रीसँग कतै घु
जाडोमा ओठ फुटेर हैरान हुनुहुन्छ ? त्यसोभए अपनाउनुहोस यि कुराहरु ,तपाइको फुटेको ओठ च्याट्टै हुन्छजाडोमा ओठ फुटेर हैरान हुनुहुन्छ ? त्यसोभए अपनाउनुहोस यि कुराहरु ,तपाइको फुटेको ओठ च्याट्टै हुन्छ
काठमाडाैं । सधैँ झैँ यस वर्ष पनि जाडो मौसम सुरु भइसकेकाे छ । जाडाे समयमा हाम्रा हात, खुट्टा, गाला, ओठ बढी फुट्ने गर्छन् । जाडो समयमा हावा सुक्खा हुने र यसको स्पर्श छालामा पर्दा छाला पनि सुक्खा हुने गर्छ। अरु भन्दा ओठ शरीरको सानो भाग भएकोले पनि यो फुट्यो भने अलि धेरै समस्या पार्छ । ओठ फुटेपछि केही खाँदा पोल्ने, हाँस्दा दुख्ने र अनुहारको सौन्दर्य बिग्रने हुन्छ । जाडोमा किन फुट्छ ओठ ? जाडोको समय वा सुख्खा धुलो चल्ने मौसममा सबभन्दा बढी ओठ फुट्छ । बढी चिसो हुँदा ओठमा रहेको तैलीय पदार्थ निकाल्ने ग्रन्थिहरूले कम तेल निकाल्छन् र फुटाइ सुरु हुन्छ । ओठ फुट्ने कारणहरू मानव शरीरलाई दैनिक दुई देखि तीन लिटर पानीको आवश्यकता पर्दछ। प्यास नलागेसम्म पानी नपिउने बानीले यस्तो समस्या निमत्याउछ। त्यसैले थोरै समयको अन्तरालमा पानी पिइराख्नु पर्दछ। क
नयाँ भेरियन्ट ‘मिक्रोन’ को-रोनाको यस्तो लक्षण देखिनासाथ सत’र्क हुनुहोला, थाहै नदिइ ज्या’ न लान सक्छ, सबैले जान्नै पर्ने २ मिनेट समय दिएर अवस्य पढ्नुहोस काठमाडौँ । यदि यी लक्षण देखिएमा तुरुन्त पिसिआर टेस्ट गर्नुहोला नत्र ज्या`नै जान सक्छ ! यसपटकको नयाँ प्रजातिको महामारी गतसालको जस्तो सामान्य छैन । ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, शरीर दुख्ने, स्वाद र गन्ध हराउने, पखाला वा र बान्ता हुने,एकदम थकान हुने, निद्रा लागिरहने, छालामा बिमिरा आउने, आँखा रातो हुनेमध्ये केहि लक्षण मिलेमा तुरुन्त पिसिआर टेस्ट गर्नुहोला । यसपटक परिवारमा एकजना संक्रमित भएमा सबै संक्रमित हुने अवस्था छ त्यसैले कुनै लक्षण देखिएमा आइसोलेसनमा बस्नुहोला । संक्रमणको शंका लागेमा तुरुन्त पिसिआर टेस्ट गर्नुहोला । सहेर वा हेरौं भनेर अलमल नगर्नुहोला। जति छिटो रोग पत्ता लाग्यो, त्यति छिटो उपचार पाउने अवस्था हुन्छ। १) पिसिआर पोजिटिभ आएमा
हिजोआज कालसर्प योगको बारेमा धेरै चर्चा सुनिन्छ । कालसर्प योग भनेको के हो ? कालसर्प योगको निर्माण कसरी हुन्छ ? र यसको समाधान के हो त ?राहु र केतु यी दुई ग्रह सौर्यमण्डलमा सँधै १८० डिग्रीको अन्तरमा हुने गर्दछन् । कहिले पनि यि दूइको दुरी घटबढ हुँदैन । जब सौरमण्डलमा राहु र केतु को एक पट्टि मात्र सबै ग्रह हुन पुग्दछन् त्यो समयमा कालसर्प योग हुने गर्दछ ।अग्रे राहु पृष्टे केतुरन्तरश्च नवग्रहाः ।कालसर्प भवेत् योगो वंशनाशो भवेद् ध्रुवम् ।।ज्योतिष शास्त्रको यस प्रमाणले पनि कालसर्प योग यस्तै अवस्थालाई भनिन्छ भन्ने पुष्टि गरेको छ । कालसर्प योग भएमा वंशनाश नै हुन्छ भनिएको पाइन्छ तर व्यवहारमा भने यस्तो भेटिँदैन । कालसर्प योग भएको मानिसको जिवनमा भने संघर्ष धेरै नै हुने गर्दछ । धेरै संघर्ष हुने भएकाले नै लाक्षणिक रुपमा वंश नाश हुन्छ भनेको हुन सक्ने देखिन्छ । कालसर्प योगलाई ज्योतिषका सबै आचार्यहरु
मन्त्रालयकै गाडी भित्र यौन क्रियाकलाप गर्ने3जना पक्राउ (5500)
किन गर्दैछन् त स्वतन्त्र युवा विद्यार्थीहरु धनगढीमा MCC बिरुद्ध कार्यक्रम ? (806)
बिजय शाहि जिउँदै भेटिए (694)
जनमैत्री अस्पताल मेरो होईन- रबि लामिछाने (599)
असुरक्षित अफगानिस्तानमा सुरक्षा प्रदान गर्दै नेपाली गार्ड (435)
केही कुरा याद हुँदैन ? यी आठ तरिकाले बढाउनुहोस् दिमागको क्षमता (401)
ठेलामा बच्चा राखि गल्ली’गल्लिमा साग बेच्दै हिंड्ने दिदिको रु;वा;उ;ने बास्तविकता’ हेर्नुहोस भिडियो
१.	नयाँ भेरियन्ट ‘मिक्रोन’ को-रोनाको यस्तो लक्षण देखिनासाथ सत’र्क हुनुहोला, थाहै नदिइ ज्या’ न लान सक्छ, सबैले जान्नै पर्ने २ मिनेट समय दिएर अवस्य पढ्नुहोस (120)
२.	बिहे गरेको छोटो समयमै के भयो गोलमालका चर्चित कलाकार म्युकुरीलाई (110)
४.	कलिलो उमेरकी आफ्नो बुहारीसँग लगातार ४ बर्षसम्म स’म्बन्ध राख्ने ससुरा पक्राउ ! (96)
५.	ओमिक्रोन भेरियन्ट देखा परेसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्यो यस्तो अपिल, अब के हुन्छ ? (95)
६.	दलालको माध्यमबाट बोलाएकी यौ’नकर्मी युवती आफ्नै श्रीमती परेपछि (90)
७.	२४ घण्टाभित्र तपाइले सोचेको काम बन्नेछ, फोटो छोई ॐ लेखि सेयर गरौं !!! (86)